China Rakajeka fluorocarbon aruminiyamu epurasitiki ndiro fekitari uye bhizimisi | Jixiang
Iyo yepamusoro yepamusoro yeiyo yakajeka aruminiyamu-epurasitiki ndiro inotora ＞ 70% fluorocarbon matatu ekunamatira zvinhu sezvinhu zvepasi, uye inowedzera Pearlescent Mica nezvimwe zvinhu zvitsva. Iine yakajeka uye yakapfava ruvara simbi. Inoita kuzadzikiswa kwekudyidzana kwekuratidzira, kudzoreredza, kudzikisira uye kumedza pakati pechiedza nezvinhu kuti vagadzire rakanakisa ruvara rwechisikwa, kuti vagadzire inoonekwa yekushongedza kwekunzwa kwekuyangarara pamusoro.
1. Iko pamusoro pevhu rinochinja pamwe neshanduko yechiedza sosi uye kona yekutarisa;
2. Kumusoro kwepamusoro kubwinya, kupfuura 85%;
Iyo inokodzera yekunze neyekunze kushongedzwa kwenzvimbo dzeveruzhinji, cheni yekutengesa, kuratidzira kushambadzira, mota 4S shop, nezvimwe.
Pashure: Nano kuzvichenesa aruminiyamu epurasitiki ndiro